I-China Acoustic Panel fektri kunye nabavelisi | Huasheng
Iiphaneli ze-Acoustic zenziwe nge-100% PET, ngenaliti yokulungisa inaliti. Inkqubo yokuvelisa yinto esebenzayo ngokwasemzimbeni & ne-eco-friendly, akukho manzi amdaka, ukuphuma, inkunkuma, akukho nto inamathela.Iphaneli zephayiphu ye-polyester ifanelekile ukuxhamla uluhlu oluninzi lwezinto eziluncedo, bayithathela ingqalelo isandi esiphindaphindwayo, ukubonelela ngolawulo lwe-acoustic ukunciphisa ubungakanani bengxolo igumbi.
Iipaneli zethu ze-PET acoustic panels ezingabinayo ityhefu, ezingadibaniyo, azinaburhalarhume kwaye azinazo izibophelelo ezisemthethweni ze-NdeC: 0.85.100% iipaneli zepowder acoustic zenziwa ngohlobo oluphakamileyo lokucinezela olushushu kwaye luboniswa ubume bekotoni yomkhenkce.inako Fezekisa iyantlukwano yokuxinana kwaye ke uqiniseke ukuba umoya ungene. Inenzuzo ezininzi, ukuhonjiswa, ukufakwa, ukubuyiswa komlilo, ukukhuselwa kokusingqongileyo, ubunzima bokukhanya, kulula ukuqhubekeka, ukuzinza, ukumelana nempembelelo, ukugcinwa ngokulula.etc.
Ilungele iofisi, igumbi lenkomfa, iholo, iKTV, igumbi lokubonisa, ibala lemidlalo, i-ect yehotele. Kuba izibonelelo zayo ezininzi kunye neempawu, zisetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ukuba zingqongqo ngakumbi ngesandi.
I-Polyester Fibre Acoustic Panel yiphaneli yokuhombisa emele ukwenziwa, yenziwe, isikwe kwaye iprintwe.
Yenzelwe ikakhulu izinto zangaphakathi zorhwebo:
* njengephaneli emiselweyo yendawo yokufaka iithayile ezogqunywe ngelaphu kwiindlela zokusebenza
* Ukubonelela ngenkangeleko elula, eguqukayo kunye nokuphinda isetyenziselwe udonga kunye nenkqubo yokulahla ekwehlelayo
* Inkqubo yephaneli ye-acoustic
* Ukutshintsha okuzinzileyo kweethayile zophahla kunye nokusetyenziswa komhlaba okuthambileyo.
Ifayibha ye-Polyester Fibre Acoustic ilungele ukubonelela ngesisombululo esisebenzayo kwaye siziva ngathi sisisombululo sayo nayiphi na imeko eludongeni. Ayibonisi kuphela ngombala ovakalelwe ngathi ukugqitywa, kodwa ikwanazo nezibonelelo ezomeleleyo ze-acoustic.
Iphaneli yefayibha ye-Polyester ifanelwe kwisinye kwisithathu sobunzima be-MDF okanye iplasterboard ngokulingana. Yimveliso egqityiweyo yobuso, engakwaziyo ukuphina, encineneyo kwaye ingasetyenziselwa njengamacala aphambili okanye icala elinye, kuyinika izibonelelo ezifanelekileyo zokulingana kwiinkqubo zokubiyela ezinomgca omde kunye nokufuna ubuninzi obuncinci ekujongeni ubunzima bayo.
1> Iphaneli yefandesi yephayiphutha yefayitile yephayiphu ye-acoustic inobuninzi obuphezulu, ukhuseleko lwendalo, ukubuyiselwa komlilo, uluhlu olubanzi lokufumana isandi rhoqo, umhlobiso olungileyo, ukusika okulula kunye nokufakwa, akukho luthuli lungcolile, njl njl njl Iimpawu ezahlukeneyo.
I-2> Imibala eyahlukeneyo kunye nokukhetha okugqityiweyo kunganelisa zonke iimfuno zomthengi kunye nokuhlobisa.
I-3> Elona banga liphezulu lokubuyisela umlilo lingafikelela kwinqanaba le-B1 (GB), kwaye okona kukhuseleko kokusingqongileyo kungafikelela kwinqanaba le-E1 (GB).
4> Ngeemfuno zabathengi bethu, sinawo phantse onke amaxwebhu ayimfuneko ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kunye nokungenisa elizweni, njengokufaka ingxelo ngomlilo, ingxelo yokusingqongileyo, ingxelo efungelweyo yesandi kunye nengxelo yovavanyo lwe-SGS njl.njl.
Okwenziweyo okuphezulu- Ukuncitshiswa kwengxolo
Yenziwe ukusuka kwi-100% izinto ezihlaziyiweyo
Ubunzima bokukhanya, ukuguquguquka kunye nokuChaneka ngokulula
Ukufakwa ngokulula kunye nokuLungiswa
Ukuphikiswa okuphezulu koMswakama, uMsipha kunye neKhemikhali
Ayincedi ekusasazeni umlilo
Ukhuseleko ngalo lonke eli xesha- Akubangeli siphazamiso okanye naziphi na izinto ezibi
Amagumbi eTeleconferencing kunye neeVideoconferencing amagumbi
Amagumbi eenjongo ezininzi
Iiofisi eziManyeneyo kunye nokunye.
Edlulileyo: Thambisa isityalo
Okulandelayo: Tyhisha isikhwama (icala lokubonakala leglasi)